Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » TCP/IP အကြောင်းလေး
1 TCP/IP အကြောင်းလေး on 19th June 2009, 2:52 pm
TCP/IP အကြောင်းလေး ပြောမယ်ဗျာ
(၁) IP address ဆိုတာ ဘာလဲ ?
TCP/IP = Transmission Control Protocol and Internet Protocol ဖြစ်ပါတယ် ။
IP တစ်ခု ဟာ 32 bit binary number ဖြစ်ပြီး decimal ဂဏန်း4လုံးနဲ့ ဖော်ပြလေ့ ရှိပါတယ် ။
decimal ဂဏန်း 1 လုံးစီဟာ 8 bits0to 255 (octets) ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ် ။အဲလို ဖော်ပြတာကို “dotted decimal” လို့ ခေါ်ပါတယ် ။
Example; 140.179.220.200 (Dotted decimal)
(၂) အမျိုးအစား ဘယ်နှခု ရှိပါသလဲ ?
Classes အမျိုးအစားကို အခုလို ခွဲထားပါတယ် ။
Class Range of Address
A 1 to 126(127) binary 0xxx နဲ့ စ ပါတယ်။
B 128 to 191 binary 10xx နဲ့ စ ပါတယ်။
C 192 to 223 binary 110x နဲ့ စ ပါတယ်။
D 224 to 239 binary 1110 နဲ့ စ ပါတယ်။
E 240 to 254 binary 1111 နဲ့ စ ပါတယ်။
ကျန်နေတဲ့ 127(localhost) ကို local loopback အတွက်သုံးပါတယ် ။သင် 127.0.0.1 ကို ping ပြီးစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ် ။
Class D addresses ကို multicasting အတွက် သုံးပါတယ်။ Class E addresses ကိုတော့ future use ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ် ။အဲဒါကြောင့်
့ IP address ကိုရိုက်တဲ့ အခါ 1 to 223 ကနေပဲ စရိုက်လို့ ရပါတယ် ။ 224
ကနေစပြီး နောက်ပိုင်းကို ရိုက်လို့ မရပါဘူး ။ အလွယ်တကူ စမ်းသပ်
Private Network Address ၄ ခုရှိပါတယ် ။
( Local loopback Address )- 127.0.0.1
( Class A )- 10.0.0.0
( Class B )- 172.16.0.0
( Class C )- 192.168.0.0
တွေကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြရအောင်- (N) က
network ကိုကိုယ်စားပြုပြီး (n) က node ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ် ။
- Class A -- NNNNNNNN.nnnnnnnn.nnnnnnn.nnnnnnn
- Class B -- NNNNNNNN.NNNNNNNN.nnnnnnnn.nnnnnnnn
- Class C -- NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.nnnnnnnn
Class A ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network (N)ပေါင်း 2^8 = 255 ကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ network ရဲ့ အောက်မှာ ကွန်ပျူတာပေါင်း (n)
255 x 255 x 255 =16581373 လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
B ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network (N)ပေါင်း 255 x 255 =65025
ကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ network ရဲ့ အောက်မှာ ကွန်ပျူတာပေါင်း (n)
255 x 255 = 65025 လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
C ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် network (N)ပေါင်း 255 x 255 x 255 =16581373
ကိုသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အဲဒီ network ရဲ့ အောက်မှာ ကွန်ပျူတာပေါင်း
(n)255 လုံးကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
(IP address မှာ
192.168. တွေပဲ ဘာလို့ ဖြစ်နေရတာလဲ လို့ မကြာခဏ အမေးခံရပါတယ်။ကိုယ်သုံးမယ်
့ ကွန်ပျူတာ အရေအတွက်(node)ဟာ ၂၅၅ လုံးကို မကျော်ဘူး ဆိုရင် Class C ကိုပဲ
နောက်တစ်ခုကတော့ node မှာ decimal no:0နဲ့255 ကိုထည့်လို့ မရပါဘူး။(ဥပမာ- 192.168.1.0* / 192.168.1.255* )
IP address မှာ node portion all Ones (11111111)=255 က Broadcast Address ဖြစ်ပါတယ် ။
IP address မှာ node portion all Zeros(00000000)=0 က Network Address ဖြစ်ပါတယ် ။
2 Good on 27th September 2009, 8:52 pm
3 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 29th December 2009, 11:00 am
နောက်တစ်ခုကဒီ topic နဲ့ ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးနော် မေးခြင်တာရှိလို့ပါ..
IPV6 အကြောင်းလေးကို လည်းဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါလား... သိခြင်လို့ပါ... IPV6 နဲ့ပတ်သတ်တာကို မသိလို့ပါ..။
4 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 30th December 2009, 12:31 pm
အင်းအဆင်ပြေပါတယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အလုပ်ပိုပေးမိတာ အားနာပါတယ်....
5 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 18th March 2010, 11:31 am
အစ်ကိုရေ IPV4/ IPV6ကွာ ခြားချက်လေးတွေ လဲ ၇ှင်းပြပေးပါအုန်း.......။။
6 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 18th March 2010, 12:00 pm
paohroung wrote: အစ်ကိုရေ IPV4/ IPV6ကွာ ခြားချက်လေးတွေ လဲ ၇ှင်းပြပေးပါအုန်း.......။။
Correct me if I am wrong. It is basicallya32 bit and 64 bit. IPv4 is 32 bit while IPv6 is 64 bit.
0.0.0.0 to 255.255.255.255 is 32 bit address.
So 64 bit address would be from 0.0.0.0 to 655xx.655xx.655xx.655xx (this one is what I think).
7 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 18th March 2010, 1:37 pm
IPv6 is 128 bits addressing .
Address format is in 8 pairs of 16 bits hexadecimal numbers. Each pair include4Hex numbers, between 0000 to FFFF .
For example IPv6 address will be something like 234F:34FD:DFCA:124A:234F:34FD:DFCA:124A .
I think MoeZatKo once write about of IPv6 on MZ. Even though there is some misunderstanding ( i guess mis-translation) in detail parts of multicasting and broadcasting, it'sagood basic one to read about of IPv6.
8 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 18th March 2010, 1:50 pm
Can you write some article about IPv6 (or) something related to your Field?
Bro Law Shay,
Can you also write some article about C++ (or) something related to your Field?
I know you two are geeks at your own field.
Can you contribute for M.I.T.R?
9 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 19th March 2010, 5:50 am
xtrm wrote: IPv6 is 128 bits addressing .
Thank you. I am nothing in networking.
10 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး on 1st April 2011, 12:16 pm
11 Re: TCP/IP အကြောင်းလေး